सामाजिक संजालमा भाईरल मन रुवाउने तस्बिरहरु (फोटोफिचर)
१. हरी शंकर प्याकुरेलले आफ्नो फेसबुक मार्फत पोस्ट गर्नुभएको स्टाटस सहितको तस्बिरहरु
पलाता २ कालिकोट साबिक धौलागोह ४ बान्जडाको तस्बिर हो । यहाँ करिब १६५ वटा घर धुरी छ्न । गाउँमा खानेपानी धारो अहि एउटा मात्र छ। अर्को धारोमा पानी भर्न जादा पैदल २ घण्टा हिडेर जानू पर्छ । यो ठाउँमा करोडौं का आयोजनाहरु संचालन भएर खारेज हुदा पनि सरोकारवाला निकाय कसैको ध्यान पुगेको छैन ।
खानेपानी को लागि महिलाहरु काखिमा बच्चाहरु च्यापेर रातभर धारोमा सुतेर एक गाग्रो खानेपानी भर्नु पर्छ । नेताहरूले खानेपानी को मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनाव जित्ने बाहाना बनाएका छ्न । तर जनताका खानेपानी समस्या भने जहाँ को तेहि छन ।जनताहरुले रित्ता गाग्री र भाडा कुडा प्रदसन सहित बाकी तस्बिर आफै बोल्छ ।
२. तुपक जैनको फेसबुकबाट
पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक चिरञ्जीवि शर्मामाथि विद्यार्थीहरुको समूहले कालो मोसो दलेको छ । ललितपुरका चोभार नजिक मञ्जुश्री पार्कमा १७ गते मंगलबार दिउँसो नै मोसो दलेको समाचार छ ।
मोसो दल्नेबेला शर्मा परिवारका सदस्यहरुसहित आफ्नै सवारीमा थिए । नियमविपरित विद्यार्थी भर्ना गरेका पोखरा विश्वविद्यालय अन्तरगतका ४२ वटा निजी कलेजलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले उनमाथी कालोमोसो दलेका हुन् ।
१५ दिनदेखि पोखरा विश्विद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा नगएका शर्मा काठमाडौंमा बस्दै आएका थिए । आन्दोलन चर्काउँदै जाँदा पनि माग सम्बोधन गर्न चासो नदिई प्रहरी लगाएर दमन गरेको भन्दै विद्यार्थीहरु आक्रोशित भएका छन् ।नियमविपरित विद्यार्थी भर्ना गर्ने कलेजमाथि कारबाही माग गर्दै काठमाडौं र पोखरामा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बैशाख १६ गते प्रदर्शनमा उत्रिएका पोखरामा ८ जना विद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
विद्यार्थीको आन्दोलनकाबीच पोखरा विश्वविद्यालयले सेमेस्टर परीक्षालाई प्रहरीको सुरक्षामा सञ्चालन गरिरहेको छ । बैशाख १६ गते करिब ४५ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाएनन् भने बैशाख १८ गते पनि करिब सयजनाले परीक्षा बहिष्कार गरेका छन् ।
३. नेपाली अनलाईन पेजबाट
करेन्ट लागेर १० बर्षिय बालकको मृत्यु, नेपालमा दिनानुदिन करेन्ट लागेर मृत्यु हुनेको संख्या वृद्धि भएको छ । कहिले बत्तिको लाईनमा करेन्ट लागेर झुन्डिएको, छट्पटिएको फोटो, भिडियो आईरहन्छ । यतिबेला यो तस्बिरले सबैको मन दुखाएको छ । यो कुन स्थानको तस्बिर हो भन्ने पेजले खुलाइएको छैन ।
४. लोक प्रेस पेजबाट
१ नेपाल प्रहरीले अपाङ्ग ब्यक्तिलाई बाटो काट्न र बस चढ्न सघाउदै गरेको तस्बिर अहिले सामाजिक संजालमा निकै भाईरल बनेको छ । प्रहरीलाई नकारात्मक कमेन्ट गर्नेहरुले पनि खुलेरै यो मानबिय सहायताको प्रशम्सा गरेका छन ।
तस्बिरमा देखिए अनुसार उनले अपाङ ब्यक्तिको व्हिल चियर गुडाउदै बाटो काट्न सघाउछन । यति मात्र होईन बस चढ्न मद्दत गरेको समेत देख्न सकिन्छ ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट संग २ बाल श्रमिक रहेको यो तस्बिर भाईरल बन्यो । जहाँ बालकहरु पानी बेच्न हिडिरहेको देख्न सकिन्छ तर कतिपयले यो फोटोसपबाट बनाएको शंका ब्यक्त गरेका छन । बालकको शरीर नजिक नमिल्दो हात देखिएको र कसको हात हो भन्न नसकिने अबस्था रहेकोले यो फोटोसपबाट बनाएको हुन सक्ने बताएका छन ।
६. आमा खुवाउने औसिमा पोस्ट गरिएका आमाका कारुणिक तस्बिरहरु
७. पशुपति आर्यघाटमा आफ्नो सानो मृत बच्चाको दाहसंस्कार गर्ने क्रममा मुर्छित परेकी आमालाई सम्हाल्दै आफन्तहरु
८. फोहोरको डङुरमा फालिएको एक नवजात शिशु
९. चुलोको छेउमा च्यात्तिएको कट्टु लगाएर सुतिरहेको, ढुंगाको सिरानी बनाएर सुतिरहेको र भारी बोकेको थकान मेटाउदै गरेका बालकहरु (भोकले मीठो भन्दैन, गरिबीले नाङ्गो भन्दैन, निन्द्राले अप्ठेरो भन्दैन)
१०. बझाङ जिल्लाको चैनपुरबाट रुपाताल जाँदै गर्दा अकस्मात माथिबाट पहिरो आई अड्किएको जीप (बझाङ फेसबुक पेजबाट)
११. वृद्ध ब्यक्तिलाई पानी खुवाउदै ट्राफिक प्रहरी
हामिले सम्भब भएसम्म स्थान, घटनाको विवरण, स्रोत खुलाएका छौ । सम्पुर्ण तस्बिर खिच्ने फोटोग्राफरहरु प्रती धन्यवाद !